Farshaxanka Dahabka & Quruxda - Soo -saareyaasha iyo Alaab -qeybiyeyaasha Shiinaha ee Dahabka & Quruxda
Hadiyado qurxoon oo dhalaalaya oo ku hawlan alaabta farsamada birta ilaa 1984. Dahabkayaga iyo Quruxdeena waxaa loo habeeyay sida giraanta, dhegaha, silsiladaha, jijimooyinka, dhegaha, soojiidashada, soo jiidashada khamriga, soo jiidashada taleefanka, buugaagta. Waxaad sahamin kartaa ururintayada cajiibka ah si aad u hesho dhiirrigelinta ka dibna samee naqshad astaan ​​shaqsiyeed. Mid kasta oo ka mid ah ayaa si fiican loo xardhay oo si fiican loo xardhay oo tayada la hubo. U dir farriintaada sidaad ula jeedo, waxaan abuuri doonnaa caarrooyin si aan ugu dhejino soo jiidashada, nagu aamin in wax yari ay caadi ka dhigi doonaan mid dhalaalaya. Sujeedo: ● Lifaaq: xarig ku jira qalab kala duwan, siddooyin, silsilad, silsilad. ● Naqshad: 2D ama 3D ama saddex jibaaran oo buuxa, maaddo, qaab, cabbir, midabyo la habeeyay ● MOQ: 100pcs ● Xirxirida: boorsada polybag, bacda maro jilicsan, sanduuqa hadiyadda, sanduuqa maqaar.
UV Daabacaadda Birta Charms Keychains
Dadka dhegta haysta / kuwa haya giraanta